Global Voices teny Malagasy » Fifampiresahana Tamin’i Gyani Maiya Sen, Iray Amin’ireo Mpandahateny Farany Mampiasa Ilay Fiteny An-dalam-pahaverezana ao Nepal · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Desambra 2018 5:57 GMT 1	 · Mpanoratra Sanjib Chaudhary Nandika (fr) i Colette Alves, Sylvia Aimée
Sokajy: Azia Atsimo, Nepal, Fiteny, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta
Gyani Maiya Sen Kusunda. Sary an'ny mpanoratra
Hatramin'ny ela, vitsy ny olona no nahalala ny fisian'ny kusunda , fiteny tandrefana iray sy ao afovoan'i Népal. Ny fanisambahoaka tamin'ny taona 2011, nataon'ny Birao Foiben'ny Antontanisa ao Népal, dia manombana ny mponin'i Kusundas ,, foko iray ao amin'ny alan'i Népal andrefana, ho manodidina ny 273. Mba hahafantarana bebe kokoa momba ny teny sy ny kolontsain'ny foko Kusunda, nihaona tamin'i Gyani Maiya Sen  Kusunda ny Global Voices – ilay iray tamin'ny roa monja mba mpandahateny tsy miambakavaka amin'ny fiteny kusunda, teny iray an-dalam-pahaverezana.
“Ireo mpanjakan'ny ala”
Mafana sady maina ny andro tamin'izay, tsy nisy olona teny an'arabe, ary na ireo mpitondra ny Tuk-Tuk [frantsay]  mandeha amin'ny herinaratra aza tsy vonona ny hitatitra anay. Mavesatr'ireo tongo-telo (trépieds), fakantsary ary fitaovana hafa maro mba hakàna horontsary, nandeha nanatona an'i Gyani Maiya Sen tao an-tanànan'i Kulmor izahay, tanàna izay miorina ao amin'ny distrika nepaley ao Dang. Gyani Maiya Sen Kusunda, vao avy feno valopolo taona, dia iray tamin'ireo mpandahateny roa miresaka tsy miambakavaka ny teny Kusunda efa miala aina. Miisa 273 ny vahoaka Kusundas, kanefa na izany aza, ireo fanadihadiana teny an-kianja tao anatin'ireo distrika nepaley dia nahitana fa ny 150 amin'izy ireo monja no miparitaka ao Dang, Rolpa, Pyuthan, Arghakhanchi ary Surkhet.
Nipetraka tao anatin'ireo tanàna ry zaeo Kusundas taorian'ny niainan'ireo razambeny tany anaty ala mikitroka sy ireo lozoka, sahala amin'ireo foko mpifindrafindra fonenana. Tsy mankao an-tanàna izy ireo raha tsy hangataka fiantrana, ary maro ireo Kusundas no mbola miahotra hilaza izay anarany satria mbola heverina ho toy ireo “mponina anaty ala” foana ry zareo. Na izany aza, amin'izao fotoana izao, naka anarana Thakuri  ry zreo, toy ny hoe Shahi, Sen ary Khan – anarana izay mifandraika amin'ny foko mpitarika ao Népal. Nanambara tena ho ban rajas, mpanjakan'ny ala ireo Kusundas.
Vakio koa : Fiteny Tompontany Nepaley Iray Manokatra Pejim-Panantenana Noho ny Fivoahan'ny Rakibolana Vaovao 
Teny mitokana ny Kusunda, izay midika fa tsy misy ifandraisany amin'ny teny hafa eto amin'izao tontolo izao. Mampalahelo fa mampiavaka azy ihany koa ny andian-taranaka tanora izay nitsahatra tamin'ny fampiasana azy – mitarika ny fanjavonany tsikelikely isaky ny misy ny fahafatesan'ireo andian-taranaka antitra. Manampy an'i Gyani Maiya, dia mpandahateny iray hafa ihany koa izay miteny azy tsara i Kamala, rahavaviny, efa mananika ny dimampolo taona.
Uday Raj Aaley , mpikaroka iray izay manokan-tena amin'ny fanomezana aina ny kusunda, mahay miteny an'io teny io ihany koa. Na izany aza, matahotra i Gyani Maiya fa i Rakshya, zafikeliny vavikely, dia tsy miteny mihitsy ny tenindreniny, araka izany tsy mandray anjara amin'ny fitazonana ho velona ny nentin-drazana. Rehefa tafahaona tamin'i Gyani Maiya izahay, sahirana nitetika manga maitso izy sy ilay zafikeliny. Nampianariny azy ny mamaofy izany, ny mandidy azy ary ny manahy azy mba ho ampiasaina atsy aoriana kely, saingy indrisy, mifampiresaka amin'ny teny nepaley izy ireo.
Gyani Maiya Sen miaraka amin'ny zafikeliny. Sary an'ny mpanoratra.
Tsy misy kitro, fa hoho fotsiny ihany
Raha iny mbola niroso tamin'ny resadresaka niaraka tamin'i Gyani Maiya iny izahay ka nanomboka noresahany taminay ny kolontsaina sy ireo fomban-drazany, nitsofoka tao an-trano ny ombivavy mpirenireny iray. Nitsangana tampoka teo amin'ny fitoerany izy, nidina ny “lisno” (hazo boribory voalavaka mitovy amin'ny tohatra), ary nandroaka an'ilay omby. Rehefa tafaverina izy, noresahany taminay ireo fombafomba ara-tsakafo an'ny Kusundas : “miala amin'ireo biby misy kitro ny Kusundas fa ankafizin'izy ireo kosa ny mihinana an'ireo izay misy hoho.” Tsy mikitika an'ireo biby ireo mihitsy aza izy ireo, ao anatin'izany ireo gisa sy ireo kisoa. Tsy mamono an'ireo diera na osy ihany koa izy ireo izay mampiseho ny fahaizan'izy ireo miara-miaina amin'ny natiora.
Na izany aza, tian-dry zareo ny mihinana vorona, ny akoholahin'ala no tena ankafiziny. Ary mankafy mihaza varan [frantsay] ry zareo. Tena miavaka fa amin'izao fotoana izao tafiditra anatin'ny fetibe fampakaram-bady izy io satria tsy maintsy asehon'izy ireo amin'ny fianakavian'izay ho vadiny ireo atodi-nà varan, ny nofony, ireo akanjony ary mazava ho azy fa ny volany ihany koa. Raha toa tsy tontosan'izy ireo ny fahitàna atodi-nà varan iray, noho izany, tsy afaka tontosaina ireo savaranonando voalohany. Ary ny tsy fisiana hena-nà varan dia midika ho tsy fisianà fampakarambady mihitsy.
Ny harona sy ny fandrika. Sary an'ny mpanoratra.
Avy eo izy namaha tady nifamatopatotra. Miendrika fandrika ireo mason-drary tamin'ireo tady mba hisamborana ireo vorona ao anaty ala ary ny harona heverina hitondrana izay vorona voafandrika. Vita avy aminà tady nalaina avy amin'ireo zavamaniry dia, mandady, antsoina hoe “aant” ny fandrika ary ny harona “aamji” amin'ny teny Kusunda. Afatotr'ireo Kusundas eo anelanelan'ny hazo roa ny fandrika, miafina eo amin'ireo manodidina izy ireo ary maka tàhaka ny feon'ireo akoholahin'ala no sady mametraka ravina cycas eo amin'ny molony. Rehefa mandalo eo anelanelan'ireo hazo ireo vorona, dia voafandrika. Samborin'ireo Kusundas izy ireny ary ataony ao anaty harona voalavadavaka.
Raha toa izahay mbola sahirana nandrakitra an'ireo teny miavaka ao amin'ny fiteny Kusunda, hitako ny andiana bibikely madinika iray niditra tao anaty lavaka kely teo amin'ny bolongan-kazo iray. Tsy tantely izy ireo na lalitra, fa antsoina hoe “putka” araka ny voalazan'i Gyani Maiya ary mamoaka ranoka mamy sahala amin'ny tantely izy ireo.
Farany, nasehon'i Gyani Maiya anay ny tranony. Namboleny oviala teny anjorony. Amin'ny alalan'ny angady, hadiany ny sasantsasany ary ataony ao anaty aamji. Ho anà vehivavy iray maherin'ny valopolo taona, mbola manana bika mijihina tsara izy. Ary ambonin'ny zavatra rehetra, ny feony mijadojadona dia ahatarafana mivaingana ny maha-izy azy tamin'ny fotoana naha tanora azy – matanjaka, sahala amin'ny “mpanjakavavin'ny ala”.
Putkas. Sary an'ny mpanoratra
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/12/07/131682/
 Tuk-Tuk [frantsay]: https://fr.wikipedia.org/wiki/Tuk-tuk
 Fiteny Tompontany Nepaley Iray Manokatra Pejim-Panantenana Noho ny Fivoahan'ny Rakibolana Vaovao: https://mg.globalvoices.org/2017/08/16/105804/
 Uday Raj Aaley: https://www.facebook.com/uday.raj.92167
 varan [frantsay] : https://fr.wikipedia.org/wiki/Varanus